မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် လဝက စိစစ်မှုပါမှသာ CI ပြုလုပ်ပေးမည် ဆိုသည့်အချက် ပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးရ?? - Yangon Media Group
မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် လဝက စိစစ်မှုပါမှသာ CI ပြုလုပ်ပေးမည် ဆိုသည့်အချက် ပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးရ??
” CI ကို အရင်လို နေ့ချင်းလျှောက်လို့ မရတော့ဘူး။ လဝကစိစစ်ပြီးမှ CI ထုတ် ပေးမယ်လို့ဆိုပြီး မြန်မာဘက်က ကြေညာတဲ့ နောက်နေ့ပဲ မလေးရှားမှာစပြီး ဖမ်း တော့တာပဲ။ အဲဒီတော့ တရားမဝင်ဖြစ်နေ တဲ့သူတွေက ပြန်မရတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် လဝက ထောက်ခံချက်ပါမှဆိုရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှ CI ရမလဲ မသိနိုင်တော့ဘူး။ အခု မလေးဘက်ကလည်း ဖမ်းနေတော့ အကုန်အခက်တွေ့ကုန်တယ်။ တချို့ဆို အဖမ်းခံရတာတွေလည်း ရှိနေပြီ”ဟု ကပုန်းလူမှုကူညီရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဝင်းက ပြောသည်။ ယင်းကြောင့် နေရပ်ပြန်မည့်အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်အလုပ်သမား/လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ရယူရန်နှင့် ယင်းထောက်ခံချက်ရရှိမှသာ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (ခေါ်) CI ကိုပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုသည့်အချက်ကို မြန်မာအစိုးရမှ ဖြေလျှော့ ပေးရန်တောင်းဆိုကြောင်း ဦးဆန်းဝင်းက ဆိုထားသည်။
”အဖမ်းအဆီးတွေက နေရာ ကျဲကျဲ ပဲ။ CI လျှောက်ပြီး ပြန်လို့လည်းမရတော့ အဖမ်းခံရအောင်လုပ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဗျာ၊ အောက်လမ်းကပြန်ရင်လည်း မမိရင် တော့ ကောင်းတာပေါ့။ အခုကပြန်လို့ သိပ်မချောင်တော့ အကုန်ချောင်ပိတ်ခံနေရသလိုပဲ”ဟု မြန်မာလုပ်သား ကိုတင့်ဆွေက ဆိုသည်။ မလေးရှားတွင် တရားမဝင်လုပ်သား ဖမ်းဆီးမှုသည်လည်း ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက် နောက်ပိုင်းမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဇန်န ဝါရီ ၇ ရက်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံရှားလမ်း မြို့တွင် မြန်မာအပါအဝင် တရားမဝင်နိုင်ငံ ခြားသားလုပ်သား ၁၂ဝ၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံကပုန်းမြို့တွင် မြန်မာအပါအဝင် တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားလုပ်သား ၁၇ဝ တို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ထပ်မံကာ နေရာကျဲကျဲဖမ်းဆီးလျက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်လည်း ထိုသို့ CI ထုတ်ပေးမှုပြောင်းလဲရခြင်းသည် လည်း CI တွင်ပါရှိသည့်အချက်အလက်နှင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုလျက်ရှိရာ တချို့အလုပ်သမားများမှာ CI တွင်ဖော်ပြထားသည့် နေရပ်လိပ်စာများတွင် နေထိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုပင် မှန်ကန်စွာဖြေဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရခြင်းကြောင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ အကြောင်းကြားလာသဖြင့် သံရုံးအနေဖြင့် ပြောင်းလဲကြေညာရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး အနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ အထောက်အထားမဲ့လုပ်သားများကိုသာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန်တစ်ခုတည်းအတွက် CI ကို အခမဲ့ဖြင့် နေ့ချင်းထုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
(၂၁)ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်ရေး နိုင်ငံတော် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အလွတ်သဘော တွေ့?
ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ဂျေရုဆလင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ၁၄ နိုင်ငံ ဝေဖန် အပြစ်တင?
တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်သုံးခုတွင် ရေဘေးကြောင့်လူဦးရေသုံးသောင်းကျော် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် ခိုလှုံနေရ